China yard ịrịba ama emeputa na Supplier | Na-agba ọsọ
Mpempe akwụkwọ Mgbasa Ozi
Mpempe akwụkwọ na-ere ọkụ
Nchedo ndị ọzọ
Nnwale mpempe akwụkwọ ESD
Ngwa ngwa ugbo ala
Mpempe akwụkwọ mkpuchi
Greenlọ ndụ ndụ
Ihe onunu na mmiri
Mpempe akwụkwọ oyi akwa
Mme Onye Okike
pp oghere bọọdụ
Ikuku plastik rụrụ arụ bụ ihe ahọrọ maka ụlọ ọrụ na-ebi akwụkwọ nzi ihu. Mpempe akwụkwọ PP Corrugated akpọkwara correx, corflute, coroplast, fluteboardt.Corrugated mpempe akwụkwọ dị mma maka ngwa na n'èzí. Ọ dị arọ karịa fiberboard, cha cha karịa mpempe akwụkwọ plastik agbachapụ agbachapụ, ọ na-enweghị ihe mkpuchi mmiri na unyi na-eguzogide.
N ’ibiputa ngwa ahia
Anyị na-enye akwụkwọ maka ibi akwụkwọ mpempe akwụkwọ, dị ka akwụkwọ nchebe mpempe akwụkwọ ala.box, dị ka okra igbe obibi, obibi akwụkwọ asparagus, obibi ọka dị ụtọ, mpempe akwụkwọ nke celery. akara akara, dị ka akara votu, akara ịdọ aka na ntị, akara ahịa na ihe ndị ọzọ.
Mpempe akwụkwọ na-acha ọcha, 2mm ka 12mm, bụ "Corona Discharge" na-agwọ abụọ site na iji nye ohere inks na nrapado ndị a kapịrị ọnụ na-agbaso.
Mgbe akara a na –ebiputa ogo dị ka ndị a:
Agba ọcha, eke, ọkụ na acha anụnụ anụnụ, acha anụnụ anụnụ, ọchịchịrị na-acha odo odo, ojii, aja aja, odo na ndị ọzọ.
Chekwa ihe eji eme ihe nkiri PE, maka nnukwu nha, 20pcs kwa otu, maka obere nha, 50pcs kwa otu.Pụta apụtakwa na ọ bụrụ na ị nwere mkpa pụrụiche, biko gwaa anyị.
Nke gara aga: akara aka na nti
Osote: igbe asparagus
akara aka na nti
EGO ANYI ANYI
Njikọ: www.rpplast.cn bestcoroplast.com
A ga-edepụta okwu na ịzụta mbadamba oghere
Ozi nkowa mgbakwunye plast oghere oghere
Officelọ ọrụ China ： NO.13887, mpaghara weifang, shandong, China
Adreesị ụlọ ọrụ Usa ： kacha mma twinwall plast address: 8605 santa monica blvd # 79525 west hollywood california 90069-4109 usa
Tẹ: 0086 13355279991